မိန်းကလေးတွေ သေချာပေါက် ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရမယ့် အမျိုးသား ပုံစံ ၅ မျိုး | Buzzy
မိန်းကလေးတွေ သေချာပေါက် ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရမယ့် အမျိုးသား ပုံစံ ၅ မျိုး
သင်ရော ဒီပုံစံတွေထဲ ပါနေပြီလား ၊?
1. ကောင်မလေးရဲ. အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း
သင့်အနေနဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ တော်တော်လေးကို ခင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အငြင်းခံရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူက သင့်ကို အစ်ကိုတစ်ယောက်လို မောင်တစ်ယောက်လို ခင်မင်မိတာမို့ပါ ၊ နောက်ပြီးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ သင်က သူ့ကို ရင်းနှီးလွန်းလို့ အခွင့်အရေးယူတာလားလို့ တွေးမိမှာမို့ပါ။
သငျ့အနနေဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ တျောတျောလေးကို ခငျနမေယျဆိုရငျတော့ အငွငျးခံရဖို့ ရာခိုငျနှုနျးတျောတျောမြားပါတယျ ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သူက သငျ့ကို အဈကိုတဈယောကျလို မောငျတဈယောကျလို ခငျမငျမိတာမို့ပါ ၊ နောကျပွီးတော့ သူ့စိတျထဲမှာ သငျက သူ့ကို ရငျးနှီးလှနျးလို့ အခှငျ့အရေးယူတာလားလို့ တှေးမိမှာမို့ပါ။
2. မောက်မာလွန်းတဲ့ အမျိုးသား
သေချာတာကတော့ မောက်မာတဲ့လူကို ယောင်္ကျားပဲ ဖြစ်စေ မိန်းမပဲ ဖြစ်စေ သဘောမကျပါဘူး ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာ ပိုလို့တောင် မဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ သင်ကဘယ်လောက်ပဲ တော်တော် အငြင်းခံရမှာပါ။
သခြောတာကတော့ မောကျမာတဲ့လူကို ယောကငြ်ျားပဲ ဖွဈစေ မိနျးမပဲ ဖွဈစေ သဘောမကပြါဘူး ၊ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ခဈြသူအဖွဈ ရှေးခယျြဖို့ဆိုတာ ပိုလို့တောငျ မဖွဈနိုငျပါသေးတယျ ။ သငျကဘယျလောကျပဲ တျောတျော အငွငျးခံရမှာပါ။
မောက်မာသူနဲ့ သိပ်တော့ မကွာလှပါဘူး ။ သူက တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှာ ဘဝင်မြင့်နေပါလိမ့်မယ် ၊ ပမာအားဖြင့် သူ့ရဲ. ရုပ်ရည် ၊ ငွေကြေး အရှိန်အဝါ စသဖြင့်ပေါ့ ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြိုက်ပြီဆိုရင် မိန်းကလေးက သေချာစဉ်းစားမှု ပြုတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မောကျမာသူနဲ့ သိပျတော့ မကှာလှပါဘူး ။ သူက တဈခုမဟုတျတဈခုမှာ ဘဝငျမွငျ့နပေါလိမျ့မယျ ၊ ပမာအားဖွငျ့ သူ့ရဲ. ရုပျရညျ ၊ ငှကွေေး အရှိနျအဝါ စသဖွငျ့ပေါ့ ။ ဒီလိုလူမြိုးတှကေ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ကွိုကျပွီဆိုရငျ မိနျးကလေးက သခြောစဉျးစားမှု ပွုတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
4. တုံးအတဲ့ အမျိုးသား
ရိုးသားမှု ရှိတဲ့ အမျိုးသားကို မိန်းကလေးတွေ လိုလားတက်ကြပေမယ့် တုံးလွန်းအလွန်းတဲ့ အပိန်းအတိမ်းတွေကိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးမှ လက်တွဲချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရိုးသားမှု ရှိတဲ့ အမြိုးသားကို မိနျးကလေးတှေ လိုလားတကျကွပမေယျ့ တုံးလှနျးအလှနျးတဲ့ အပိနျးအတိမျးတှကေိုတော့ ဘယျမိနျးကလေးမှ လကျတှဲခငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။
5. စွဲဆောင်မှု မရှိသူ
ပင်ကိုယ် ရုပ်ဆိုးတာဟာ စွဲဆောင်မှု မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စွဲဆောင်နိုင်မှု မရှိတဲ့ လူမျိုးကို မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တက်ကြပါဘူး။
ပငျကိုယျ ရုပျဆိုးတာဟာ စှဲဆောငျမှု မရှိတာ မဟုတျပါဘူး ၊ မိနျးကလေးတဈယောကျကို စှဲဆောငျနိုငျမှု မရှိတဲ့ လူမြိုးကို မိနျးကလေးတှေ မကွိုကျတကျကွပါဘူး။